Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny kit ny masoandro sy ny tombony | Fanavaozana maintso
Raha toa ianao ka nisafidy ny hampiasa angovo avy amin'ny masoandro hamatsiana anao, na ao an-tranonao na any amin'ny orinasanao, dia mety efa naheno momba ilay kitin'ny masoandro ianao. Kitin'ny masoandro mamela anao hahazo angovo herinaratra amin'ny alàlan'ny hazavan'ny masoandro azo ary ovàna ho fitarihana mivantana.
Te hahafantatra ve ianao hoe inona ny kitapo amin'ny masoandro, ny tombony omeny ary inona ny singa ilainao? Mamaky hatrany.
1 Inona no ataon'ny kitapo masoandro?
2 Singa amin'ny kitin'ny masoandro photovoltaic
3 Tombontsoa amin'ny fanakarama kit ny masoandro
4 Fametrahana sy fanaraha-maso
5 Manambola mandritra ny fotoana maharitra
Inona no ataon'ny kitapo masoandro?
Ny kitapo photovoltaic amin'ny fanjifana tena matetika dia miasa amin'ny fomba tsotra be mba hahafahan'ny karazan'olona rehetra ampiasaina, nefa tsy mila mahalala betsaka momba an'io lohahevitra io. Ireo kitapo masoandro ireo dia tompon'andraikitra amin'ny fakana ny tara-masoandro sy manova azy ho angovo herinaratra amin'ny alàlan'ny fanodinana ankehitriny.
Manana ny tontolon'ny masoandro mivezivezy ankehitriny amin'ny endriny mifandimby. Na izany aza, ny kitin'ny masoandro, amin'ny alàlan'ny mpanova na mpanova ankehitriny, dia manova ny diany mivantana ho lasa ankehitriny mifandimby. Mitranga izany satria ny taratry ny masoandro dia misy fotom-pahazavana izay, rehefa mifandona amin'ireo takelaka amin'ny masoandro, dia miteraka fahasamihafana mety hiteraka famoahana arus mivantana.
Ny angovo tavela amin'ny fizotran'ny fanovana angovo elektrika azo tehirizina anaty bateria na mpanangona ampiasaina raha tsy mifanaraka amin'ny antoandro na amin'ny alina ny taratry ny jiro.
Singa amin'ny kitin'ny masoandro photovoltaic
Kit ny masoandro dia manana singa efatra tena ilaina sy ilaina tokoa raha toa ianao ka mieritreritra ny hanome angovo tenanao amin'ny tenanao.
Ny zava-dehibe mamorona kit ny masoandro Izy io dia ny tontolon'ny masoandro izay ahafahantsika mandray ny taratry ny Masoandro ary hiteraka fitetezana mivantana. Mba hahafahana mampiasa an'io herinaratra io ho an'ny kojakojam-pianakaviana sy fitaovana elektronika isan-karazany ao an-trano dia misy inverter ankehitriny. Ny inverter na converter dia tompon'andraikitra amin'ny fanovana ny onja mivantana novokarin'ny tontolon'ny masoandro ho lasa alternating ankehitriny mba ahafahana mampiasa azy.
Raha te hitahiry ny angovo tavela hatrizay, amin'ny ankapobeny, tsy ny rehetra no lany, ny kitapo dia misy bateria afaka mitahiry angovo hampiasa azy amin'ny toe-javatra ilaintsika indrindra.
Farany, mba tsy mihoatra ny andraikiny ny bateria ary ho lasa be loatra, ny kit dia mila manana mpandrindra.
Tombontsoa amin'ny fanakarama kit ny masoandro
Ny kitin'ny masoandro photovoltaic dia manana tombony lehibe ho an'ny tranontsika sy ny asantsika. Ho an'ireo manana biraon'ny orinasa SME dia azon'ny herin'ny masoandro ampiasaina izany hampihenana ny vidin'ny famokarana sy ny fikojakojana.
Anisan'ireo tombony azo tamin'ny alàlan'ny fahazoana kit ny masoandro photovoltaic hitantsika:
Fampiasana tsotra na amin'ny fametrahana azy (tsy mila fahalalana elektrika na injeniera dia azonao atao ny manangona azy), ary rehefa mampiasa sy mitazona azy.
Mora ny mitazona azy satria tsy mila na inona na inona izy io.
Ny halavan'ny kitapo dia lava be, satria naharitra 25 taona teo ho eo ny valin'ny masoandro, fotoana ampy handoavana ny kitapo.
Vonona hiatrika ireo karazana isan-karazany ny fotodrafitrasa toetr'andro ratsy, ka tsy mila miahiahy momba ny andro ratsy ianao na rehefa avy ny orana na ny rivotra.
Manome tombony ny fampiasana azy amin'ny toerana tsy mahatratra ny tariby herinaratra, toy ny any ambanivohitra, ary mamela ny angovo hotehirizina ao anaty batery raha misy vonjy maika.
Raha mitombo ny filàna angovo, afaka mampitombo ny hery foana ianao amin'ny fotoana rehetra manampy panneaux solaires vaovao.
Raha avelan'ny firenena, angovo ambiny azo amidy mandatsaka ny angovo ao anaty tariby elektrika.
Fametrahana sy fanaraha-maso
Misy karazana rafitra samihafa arakaraka ny karazana tafo anananao. Na mirongatra ny tampon-trano na fisaka. Na inona na inona karazana tafo anananao dia mila takelaka masoandro apetraka ianao amin'izay misy fiantraikany mivantana amin'ny taratry ny masoandro.
Mba hametrahana tsara ireo takelaka masoandro, zava-dehibe ny fisorohana ny aloka mitranga amin'ny tampon-trano manana orientation sarotra izy ireo. Raha aloka ny tontolon'ny masoandro dia ho very ny sehatra ilaina mba hiteraka angovo.
Ny fironana amin'ny tontolon'ny masoandro dia tsy maintsy farafahakeliny 30 degre, mba hialana amin'ny fatiantoka tsy ilaina ary ny tara-pahazavana azo avy amin'ny masoandro.
Tokony hiezaka hatrany ianao hampifangaro ny tontonana amin'ny masoandro amin'ny fomba tsy manapotika ny firindran'ny famolavolana trano, fa tsy manary ny fahombiazan'ny angovo.
Araka ny efa voalaza tetsy aloha, ny fametrahana ny panneaux solaires tsotra be izany ka vitanao ny manao azy. Misy orinasa tompon'andraikitra amin'ny fametrahana panneaux solaires, fa mazàna ny singa ilaina rehetra dia omena hahamora izany ka amin'ny alàlan'ny torolàlana tsotra sy ny rafitra fivoriambe dia azonao atao izany.
Ny fanaraha-maso ny kitin'ny masoandro dia sanda fanampiny, satria ny ankamaroan'izy ireo dia mitondra ny safidin'ny fanaraha-maso ireo fitaovana. Raha te-hahita ny fomba fiasan'izy ireo amin'ny tena izy isika dia ilaina ny mametraka kojakoja hampifandray ireo fitaovana amin'ny solosaina ary hifehezana tsara kokoa ny fiasan'ny kitapo masoandro.
Manambola mandritra ny fotoana maharitra
Ireo famatsiam-bola ireo dia lafo kokoa hatrany am-piandohana ary izany no mahatonga ny olona maro mihemotra tsy handeha amin'ny herin'ny masoandro. Na izany aza, zava-dehibe ny hahazoana antoka fa, rehefa misafidy ny hividy kit kitapo masoandro, ny fitaovana anaovana azy dia manana kalitao avo indrindra sy azo ianteherana. Izany dia hahatonga ny fitaovana haharitra ela hahasoa sy handoavana ny fampiasam-bola amin'ny fotoana fohy indrindra.
Marihina fa ireo fampiasam-bola ireo dia mazàna mandoa amin'ny fotoana maharitra. Raha hampiasaina isan'andro ity kit ikinin'ny masoandro ity dia tsara kokoa ny hahazoanao faritra misy kalitao satria amin'ny farany lafo dia lafo.
Azonao atao ny mametaka ireo kitapo masoandro vita mialoha izay noforonin'ireo orinasa na mamolavola fametrahana anao amin'ny fomba iray izay ahafahany manangona izay ilainao rehetra.
Amin'ity fampahalalana ity dia antenaiko fa afaka mandray ny dingana ianao ary manohana ny tetezamita angovo mankany amin'ny tontolon'ny fanavaozana azo havaozina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Angovo Solar Photovoltaic » Kitapo amin'ny masoandro
Vokatra hydroponic, inona ireo ary ahoana ny fomba fanaovana azy ao an-trano